Mna ukuphendula, kodwa wam impendulo ngu-kwam ndizixelela ukuba umsebenzisi andivuyiswa correspond kunye abasebenzisi kunye ngaphantsi kwe-inkangeleko imifanekiso. Ngaphezu koko baye mna musa ukuphendula ukuba abasebenzisi kunye engenanto zabucala. Mna ukulifumana insulting ukuba ufuna njengoko umsebenzisi andinaku thatha imizuzu ukulayisha ezimbalwa imifanekiso ne posa ezimbalwa izivakalisi malunga ngokwakho, kanti ufuna zithungelana kunye umsebenzisi abo opted ukuthatha ixesha. Mna ixabiso ixesha lam nje kangangoko umsebenzisi abo lugqiba ukuba ushiye zabo inkangeleko engenanto. Wam iimfuno kuba impendulo ngu-Inkangeleko Imifanekiso, i-Bio ubuncinane izivakalisi, kwaye umyalezo wokuqala equlathe akukho ngaphantsi kwe-mazwi.
Wam iimfuno zihleli, Bios kwafuneka kufuneka ubuncinane mazwi. Mna musa ukungena na dating site ngenxa mna hate yokuba mna kufuneka urhulumente zonke yam yobuqu apho, njenge umvuzo, okanye ulwazi ayi kubalulekile kuba kum (Isitshayina yezilwanyana okanye inkwenkwezi sayina). Mna balingwe ukuba sayina, kodwa xa ndabona ulwazi mna kufuneka anike, mna imile.
Hayi, ukuba lento ayi indlela kumele ibe
Mna ikhethe a dating site kunye lwesiqulatho apho kugxilwa ngosuku lwe stories kwaye izimvo kuqala, hayi ukwenza yonke into kuba ubuhle kwaye ingeniso contest.
Ndiyazi ukuba dating site akavumelekanga ukuba zikho
Ukuba umntu akuthethi ukuba kufuneka umfanekiso phezulu, ngu red beflegi. Zininzi kakhulu nemigaqo yokusebenzisa imichiza phandle phaya ukuba bother seeveki sele exhibiting enjalo omkhulu red beflegi. Hayi, akunyanzelekanga ukuba ngenxa kuba nam kubalulekile njani umntu ikhangeleka kwaye akuvumelekanga ukuba malunga ubuhle, kubalulekile ngaphezulu malunga openness kwaye trust. Ndifuna ukwazi esabelana ndithetha, kululuvo real umntu okanye iibhonasi. Ukuba ndibona kwi-app njenge Tinder i-chitha inkangeleko andiyi efana nayo.
Njengoko ayithethi ukuba ndithi nantoni na malunga umntu
← Omdala Dating - Australian Omdala Dating Site kuba horny abantu abathanda phantsi Wobulali Ngesondo
Ividiyo Dating - Dating kwi-Austria →